यी दुई राशि कहिले पनि एक हुन सक्दैनन्, सँगै रहेपनि खुसि हुन सक्दैनन् ! – Jagaran Nepal
यी दुई राशि कहिले पनि एक हुन सक्दैनन्, सँगै रहेपनि खुसि हुन सक्दैनन् !
राशि अनुसार हरेक व्यक्तिको स्वभाव र आचरण फरक-फरक हुन्छ। यहि कारणले गर्दा एक राशिका व्यक्तिहरु अर्को राशि भन्दा भिन्न हुन्छन्। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एक व्यक्तिको सम्बन्ध अर्को व्यक्तिसंग कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि राशिमा भर पर्छ।राशि अनुसार विचार, स्वभाव र आचरण फरक-फरक हुने हुँदा एक राशिको अर्को राशिसंग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध रहने ज्योतिषीहरु बताउँछन्। ज्योतिष शास्त्र अनुसार निम्न राशि बीच सम्बन्ध खासै राम्रो हुँदैन।
वृश्चिक र मेष राशि,,,,सामान्यतया वृश्चिक र मेष राशि हुने मानिसहरु बीच सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। यी दुई एक साथ खुसि हुँदा सक्दैन। वैचारिक रुपमा पनि यी दुई धेरै भिन्न हुने कारणले गर्दा पनि यी दुई बीच सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्दैन। मेष राशि हुनेहरु शान्त रहेपनि मनमा कुरा भने राख्न सक्दैनन्। उता वृश्चिक राशि हुनेहरु छिट्टै रिसाउने भएको कारणले गर्दा पनि यी दुई बीचको सम्बन्ध सुखद हुँदैन।
कुम्भ र कर्कट राशि,,,,कुम्भ राशिका मानिसहरु प्राय शान्त हुन्छन्। उनीहरु कम बोल्छन्। आवश्यकता भन्दा बढी बोलेको यिनीहरुलाई मन पर्दैन। तर, कर्कट राशि हुनेहरु कुम्भ राशि हुनेहरु भन्दा फरक हुन्छन्। कर्कट राशिक मानिसहरु छिट्टै रिसाउँछन्। साथै सानो-सानो कुरा पनि सहन नक्सने बानिका कारण यी दुई बीचको कुनै पनि सम्बन्ध लामो समय सम्म टिक्न सक्दैन।
वृष र सिंह राशि,,स्वभाव, आचरण तथा चरित्रको हिसाबले वृष र सिंह धेरै फरक छन्। वृष राशि हुनेहरु शान्त हुन्छन्। साथै यिनीहरु सहनशील पनि हुन्छन् यसको ठिक उल्टो सिंह राशि हुनेहरु उग्र स्वभावका हुन्छन्। साना-साना कुरा पनि सहन नसक्ने हुँदा सिंह र वृष राशि बीच सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन।